South Africa's oldest magazines goes online for COVID-19 lock down
South Africa's oldest agricultural magazine has announced today its publication will be distributed online and for free for the remainder of the COVID-19 lock down in South Africa.
President Cyril Ramaphosa announces the re-opening of the economy
Speaking from the Union Buildings in Pretoria last night, President Cyril Ramaphosa announced the South African economy would start to re-open on May 1 following a five-week hard lock down in responses to the COVID-19 outbreak in the country.
Treasury has a responsibility to the Land Bank - Mboweni
Speaking to the South African public on how the R500 billion COVID-19 bail out funding would be used, Finance Minister, Tito Mboweni said on Friday lengthy discussions with the Land Bank were underway to ensure the agriculture financier could continue to function.
Treasury announces further COVID-19 tax measures
South Africa's Minister of Finance, Tito Mboweni has announced a second set of measure aimed at assisting individuals and businesses to mitigate against the financial impact of the COVID-19 pandemic.
President Cyril Ramaphosa announces R500 billion COVID-19 relief
In a live speech delivered from the Union Buildings last night, South African President, Cyril Ramaphosa said a second phase of economic relief to stabilise the country's economy following the COVID-19 outbreak in the country was underway.
KwaZulu-Natal farmers deliver food parcels during COVID-19 lockdown
The Ixopo Highflats Farmers' Association in partnership with the Ubuhlebezwe Municipality, the Creighton Sunflower Fund and Woza Moya Project handed out fresh and dry produce and vegetable seedlings to 200 families ahead of the Easter Week-end.